Ny mosary ao anatintsika - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Day-by-Day > Ny hanoanana lalina ao anatintsika
“Mijery anao ny rehetra, ary mamahana azy amin'ny fotoana mety ianao. Manokatra ny tananao Hianao ka mameno ny zava-boarinao ... » (Salamo 145, 15-16 Fanantenana ho an’ny rehetra).
Indraindray aho mahatsapa mosary mikiakiaka ao anaty ao anaty. Amin'ny eritreritro dia miezaka ny tsy hiraharaha azy aho ary hanala azy mandritra ny fotoana kelikely. Saingy tampoka teo dia tonga indray izy.
Miresaka momba ny faniriana aho, ny faniriana ao anaty antsika hikaroka lalina kokoa, ny fitalahoana ho fahatanterahana izay ezahintsika hofenoina zavatra hafa. Fantatro fa mila bebe kokoa avy amin'Andriamanitra aho. Saingy noho ny antony sasany ity zava-mihomehy ity dia mampatahotra ahy, toy ny hoe nangataka betsaka ahy noho ny azoko omena azy. Matahotra aho raha avelako hiakatra izy ireo izay hampiseho ny lafiny mampihoron-koditra amiko. Izy io dia hampiseho ny fahitako azy, hanambara ny filana fiankinan-doha amin'ny zavatra iray na olona lehibe kokoa. I Davida dia noana fa tsy azo lazaina amin'ny teny fotsiny. Nanoratra salamo ho an'ny salamo izy ary mbola tsy afaka nanazava izay notadiaviny.
Ny tiako holazaina dia mahatsapa izany fahatsapana izany isika rehetra indraindray. Ao amin’ny Asan’ny Apostoly 17,27 Izao no voalaza ao: “Nanao izany rehetra izany izy satria tiany hitady azy ny olona. Tokony ho afaka mahatsapa sy mahita azy ianao. Ary tena akaiky antsika tsirairay izy! " Andriamanitra no namorona antsika ho tia azy. Rehefa misintona antsika izany, dia mahatsiaro noana isika. Matetika isika no maka fotoana kely mangina na mivavaka, nefa tsy tena maka fotoana hitadiavana azy. Miezaka mandre ny feony mandritra ny minitra vitsivitsy izahay, ary kivy. Sahirana loatra izahay ka tsy afaka mifikitra aminy intsony, oh vao hitanay hoe hatraiza ny nanakaiky azy. Tena nanantena ny handre zavatra ve isika? Raha izany no izy, moa ve isika tsy hihaino toy ny hoe miankina amin’izany ny aintsika?
Io hanoanana io dia toa feno fahafaham-po ny Mpamorona antsika. Ny hany fomba ahafahany mampinono azy dia ny mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra. Raha matanjaka ny hanoanana dia mila fotoana bebe kokoa amin'izany isika. Miaina fiainana sahirana daholo isika rehetra, fa inona no tena lehibe indrindra amintsika? Vonona ve isika hahafantatra azy bebe kokoa? Manao ahoana ianao? Ahoana raha mangataka ora iray izy amin'ny maraina? Ahoana raha mangataka mandritra ny adiny roa izy ary na dia ny sakafo fisakafoanana na antoandro? Ahoana raha nangataka ahy handeha any ivelany izy ary hiara-miaina amin'ny olona izay mbola tsy nahare ny filazantsara talohan'izay?
Vonona hanome ny eritreritra, ny fotoanantsika ary ny fiainantsika amin'i Kristy ve isika? Tsy isalasalana fa mendrika izany. Ho lehibe ny valiny, ary mety ho fantatry ny olona maro izany satria manao izany.
Ray ô, omeo sitrapo aho hitady anao amin'ny foko rehetra. Nampanantena ny hihaona aminay ianao rehefa manatona anao. Te hanatona anao aho anio. amena